आउने आइतबार ३१ अक्टोबर Halloween हो!
＜हेलोवीन को उत्पत्ति＞
Halloween प्राचीन Celts मा उत्पन्न भएको निजी घटनाहरुमध्ये एक हो। त्यो बेला हरेक बर्ष अक्टोबर ३१ को रातमा दुष्ट आत्माहरु र बोक्सीहरु देखा पर्छन् भन्ने विश्वास थियो। त्यसैले, दुष्ट आत्माहरु र बोक्सीहरुबाट आफूलाई बचाउनको लागी मुकुट लगाउने र ताबीजलाई जलाएर आगो बाल्ने गर्थे रे । आजकल, यसको धार्मिक अर्थ लुप्त हुँदै गईरहेको छ। बच्चाहरुले आत्मा र भूतको भेषमा मिठाई पाउने र भयको आनन्द लिने इभेन्टको रुपमा धेरै देशहरुमा Halloween लोकप्रिय छ।
नेपालमा खासै Halloween मनाउने चलन छैन तर आजकल पश्चिमी संस्कृतिको प्रभावका कारण मानिसहरु यसप्रति आकर्षित हुँदै गईरहेको पाईन्छ।
जापानको विभिन्न भागहरुमा Halloween इभेन्ट आयोजना गर्ने, त्यस्तै साथीहरु मिलेर पार्टी गर्ने गर्छन्। Halloween इभेन्ट र पार्टीमा सहभागीताको लागि इभेन्ट उपयुक्त पोशाक हुनु पनि जरूरी छ ।
पौराणिक बोक्सी र राक्षसहरुको अतिरिक्त, आजकल, फिल्मको विभिन्न पात्रहरूको भेष बदल्ने, विशेष गरी जापानमा, एनिमेसन र खेल पात्रहरुको भेष बदल्ने मानिसहरु पनि धेरै छन्। हरेक बर्ष नयाँ विचारहरुको सिर्जना भई Halloween अधिक रोचक बन्दै गईरहेको छ।
＜यस वर्षको पहिरन प्रवृत्ति भन्नाले? ＞
यस बर्षको पहिरन प्रवृत्ति के होला ? हाल चलिरहेको एनिमे र फिल्महरुबाट आइडिया लिनु पनि राम्रो होला, त्यस्तै यस बर्ष आयोजित टोक्यो ओलम्पिक र पारालिम्पिकबाट आइडिया लिनु पनि ठिकै होला कि!
साथै, हालका वर्षहरुमा पौराणिक बोक्सी र राक्षसहरुको भेषलाई "वास्तविकता" झल्काउने प्रवृत्ति आएको देखिन्छ । यदि के गर्ने भनेर सोचमा हुनुहुन्छ भने, बिभिन्न सामानहरु पाईने पसलमा जाँदा कसो होला?
< यस बर्ष पनि सान्मिचु (तीन कुरा बन्द) बाट टाढा रही Halloween को आनन्द लिऔं! ＞
गत बर्षबाट निरन्तर, यस बर्ष पनि, नयाँ कोरोनाभाइरसको प्रभावको कारण सान्मिचु (तीन कुरा बन्द) बाट टाढा रही, प्रत्येकले आफ्नै घर वा अनलाइनमार्फत् Halloween को आनन्द लिऔं।
सुपरमार्केट र कन्भिनीयन्स पसलहरुमा, विभिन्न प्रकारको Halloween को बिशेष मिठाईहरु बिक्री मा राखिएका छन्। यस अतिरिक्त, खाना डेलिभरी सेवा पनि गत बर्ष भन्दा धेरै बढेकोले, सुविधाजनक बन्दै आएको छ।
पक्कै पनि यस वर्षको Halloween, अरु बेलाको भन्दा भिन्न तरिकाले, आफ्नो साथीभाई र घरपरिवारसँग मनाउनुहोला है।
अक्टोबर १ कफी दिवस थियो। तपाईंहरु दिनमा कति कप कफी पिउनुहुन्छ होला?
जापानमा पहिलो पटक कफी आएको, सन् १६४० को दशकतिर हो। त्यस समयमा नागासाकी शहर सबैभन्दा प्रभावशाली थियो।
बिदेशीहरुलाई प्रतिबन्दित त्यस समयको जापानमा, संसारसँग अन्तरक्रिया गर्नको लागी अनुमति दिइएको Dejima मा नियुक्त एक डच व्यापारीद्वारा कफी ल्याइएको थियो भनिन्छ।
जे होस्, त्यस समयमा, कफी पिउन सक्षमहरु भनेको, उनीहरुसँग सम्पर्कमा आउन सक्ने अधिकारी, व्यापारी, दोभाषे, गेईस्या आदि सिमित व्यक्तिहरु मात्र थिए।
हालका वर्षहरुमा, कफीको स्वास्थ्य समारोह सम्बन्धित संसारभर विभिन्न संगठनहरुद्वारा अनुसन्धानहरु प्रस्तुत गरि, मिडियाको माध्यमबाट कफीलाई विश्वसामु पेश गरिंदैआईरहेको छ। साथै, यस किसिमको जानकारी इन्टरनेटबाट पनि पाउन सकिन्छ।
फुकुओका शहरमा आकर्षक क्याफेहरु धेरै छन्। विश्व च्याम्पियनशिपमा पुरस्कार विजेता Barista पनि छ । यदि रुचि भएमा, एक पटक भ्रमण गरेर हेर्दा कसो होला!
बुकिंग साइटबाट एकै समयमा दोस्रो पटकको खोपको लागि पनि बुकिंग गर्नुहोस्।
साइटबाट बुकिंग गर्न गाह्रो भएमा, फोन मार्फत पनि बुकिंग गर्न सक्नुहुन्छ।
बुकिंगका लागि खोप कुपन नम्बरको आवश्यक पर्छ।
खोपको दिनमा; खोप कुपन, प्रारम्भिक चिकित्सा जाँच फाराम एक प्रति र पहिचान खुल्ने कागजातको आवश्यक पर्दछ।
खोप कुपन टाँस्न मिल्ने सीलको रुपमा छ। तर सील नउप्काइकन सील सहितको कागज खोप केन्द्रमा लिएर जानुहोस्।
१ पटकको खोपमा १ प्रति प्रारम्भिक चिकित्सा जाँच फाराम प्रयोग गरिन्छ। कृपया खोप निर्देशिका पढेर, अग्रिम रुपमा भरेर लैजानुहोस्।
खोप लगाउँदा खेरि, खोप कुपनको कागजमा सील टाँसीदिन्छ।
यो खोप लगाउन सकिएको हो भनेर देखाउने महत्वपूर्ण कागज भएकोले नहराउने गरि राख्नुहोला।